Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay dhaleeceentii Beesha Caalamka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay dhaleeceentii Beesha Caalamka
Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay dhaleeceentii Beesha Caalamka
Muqdisho (Halqaran.com) – DF Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay cambaareyn uga timid qaar kamid xubnaha beesha caalamka, kuwaas oo sheegay in aysan ku qanacsaneyn qaabkii kalsoonida looga la noqday xukuumaddii uu hoggaaminayay ra’iisul wasaare Xassan Cali Kheyre.
Shirka golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay sii-hayaha xilka ra’iisul wasaaraha, ahna ra’iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleyd ayaa looga hadaladii kasoo baxay Mareykanka iyo Midowga Yurub.
“Golaha wasiirrada waxay bogaadiyeen taageerada beesha caalamka ay marwalba la garab taagan tahay dowladda federaalka, haddana dhinaca kale waxay golaha wasiirrada ay safiirada iyo dowladaha aan saaxiibka nahay ka codsadeen inay ixtiraamaan madaxbanaanida, dastuurka iyo go’aamada hey’adaha dastuuriga ee dowladda”, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Wasiir Maareeye, ayaa sheegay, in wixii tala ah ee ay hayaan ay tahay inay u maraan wado diblomaasiyadeed.
Sidoo kale, Mahdi Guuleed, sii-hayaha xilka ra’iisul wasaaraha, ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo qoray “golaha wasiirada waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in saaxiibadeen beesha caalamka ay ixtiraamaan madaxbanaanida dalkeena iyo dastuurkeena”.
Ugu dambeyn, hadalka DF Soomaaliya ayaa yimid kaddib markii Mareykanka iyo Midowga Yurub ay sheegeen in xil ka qaadistii Kheyre ay ahayd mid aan waafaqsaneyn Nidaamka.